အဂွေရို ၊ အင်ဆစ်ဂနီ တို့ရဲ့ ဒဏ်ရာ အကြောင်းတွေ ၊ ချန်ပီယံလိဂ် လူစာရင်းတွေ နဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
အဂွေရို ၊ အင်ဆစ်ဂနီ တို့ရဲ့ ဒဏ်ရာ အကြောင်းတွေ ၊ ချန်ပီယံလိဂ် လူစာရင်းတွေ နဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
မန်ချက် စတာ စီးတီး အသင်း တိုက်စစ်မှုး ဆာဂျီယို အဂွေရို ဟာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ပွဲမှာ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာ ကြောင့် ရက်သတ္တပတ် အချို့ အနားယူ ရတော့ မှာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာထဲ မှာ ကစားမယ့် မန်ချက်စတာ ဒါဘီ ကို လွဲချော် တော့မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
နာပိုလီ တိုက်စစ်မှုး အင်ဆစ် ဂနီ ဟာလည်း ဒဏ်ရာ ကြောင့် ယခု အပတ် ကစား ရမယ့် လီဗာပူး နဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ပွဲစဉ် ကို လွဲချော် မယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
စပါး နည်းပြ မော်ရင်ဟို ကတော့ တပည့် ဟောင်း ဇလာတန် အီဘရာ ဟီမိုဗစ် ကို ခေါ်ယူ မှာ မဟုတ်ဘူး လို့ ငြင်းဆန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ အီတလီ က သတင်းတွေ ကတော့ ဇလာတန် ဟာ အေစီမီလန် ကို ပြန်ရောက် ဖို့ သေချာ သလောက် ရှိနေတယ် လို့ ဖော်ပြ နေကြပြီး ဇလာတန် ရဲ့ မိသားစု ဟာလည်း မီလန်မြို့ မှာ နေထိုင် လို ကြတယ်လို့ ဖော်ပြ ခဲ့ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် တိုက်စစ်မှုး ဟီဂွာအင် ကတော့ သူ ဟာ စီးရီးအေ ပွဲစဉ် မှာ ၂ ဂိုးသွင်းပြီး သူရဲကောင်း ဖြစ်ပေမယ့် ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ရဲ့ နေရာ ကို လုယူဖို့ ရည်ရွယ်ချက် မရှိ ပါဘူးလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ယူဗင်တပ် နည်းပြ ဆာရီ ကလည်း သူနဲ့ ရိုနယ်ဒို အကြားက ဆက်ဆံ ရေး ဟာ ကောင်းမွန် ပါတယ်လို့ ချန်ပီယံ လိဂ် ပွဲ မတိုင်ခင် ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး နည်းပြ မော်ရင်ဟို ဟာ ဇန်နဝါရီ အပြောင်း အရွှေ့ ကို စီမံ ဖို့ အတွက် ပေါ်တူဂီသား စူပါ အေးဂျင့် ဂျော့ မန်ဒက်စ် နဲ့ ချိတ်ဆက် ထားတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဂီတာဖေး အသင်း ဟာ ဘာစီလိုနာ ကစား သမား ကားလက်စ် အေလီနာ ကို ဇန်နဝါရီ မှာ ခေါ်ယူဖို့ အတွက် စီစဉ် နေတယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် ဟာ နည်းပြ မာကို ဆေးလ်ဗား ကို လာမယ့် ၂၄ နာရီ အတွင်း ထုတ်ပယ် ကာ နည်းပြ ဟောင်း ဒေးဗစ် မိုရက်စ် ကို အစားထိုး ခန့်အပ် ဖို့ လုပ်ဆောင် နေပြီ လို့လည်း သတင်းထွက် ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဂယ်ရီ နဗီးလ် က တော့ အာဆင်နယ် ဟာ စပါး နည်းပြ ဟောင်း ပိုချက်တီနို ကို ခေါ်ယူ ခန့်အပ်သင့်တယ် လို့ အကြံပြု သွားခဲ့ ပါတယ် ။
PSG အသင်း ဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်း နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားမယ့် လူစာရင်း မှာ တိုက်စစ်မှုး ၄ ဦး စလုံး ကို ထည့်သွင်း ခဲ့သလို ကွင်းလယ်လူ မာကို ဗာရက်တီ လည်း ပါ၀င် လာခဲ့ ပါတယ် ။ PSG နည်းပြ တူချယ် ကတော့ သူ ဟာ နေမာ ရဲ့ အနာဂါတ် ကို မပိုင်ဆိုင် ပါဘူး လို့ ဆိုရင် ဘရာဇီးသား အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် ရဲ့ PSG အသင်း နဲ့ ကစားမယ့် လူစာရင်း မှာတော့ ဘေးလ် ပါ၀င် လာခဲ့ပြီး ဗီနီဆီယပ် ဂျူနီယာ ကတော့ ဒဏ်ရာ ကြောင့် ကျန်ရစ် နေခဲ ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို ဟာ နာမည်ကျော် အားကစား အမှတ်တံဆိပ် Nike က စပွန်ဆာပေး ထားတဲ့ စပါး အသင်း ကို ကိုင်တွယ် ခဲ့ ပေမယ့် Nike ရဲ့ ပြိုင်ဘက် Adidas က တော့ မော်ရင်ဟို ကို သူတို့ရဲ့ သံတမာန် အဖြစ် ကနေ ရုတ်သိမ်း သွားဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူး လို့ သိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အပါ အဝင် ဥရောပ ကလပ် အချို့က စောင့်ကြည့် နေတဲ့ ဘာကာ နောက်ခံလူ ဆင်မြူရယ် အမ်တီတီ ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်း ဟောင်း လိုင်ယွန် ကို ပြန်သွား ဖို့ ရှိနေတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အင်တာမီလန် အသင်း ကတော့ အတ္တလန်တာ အသင်း ရဲ့ ဆွီဒင် ကစား သမား ကူလူဆက်ဗ်စကီး ကို ခေါ်ယူ ဖို့ ဆွေးနွေး နေကြတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစားသွား ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၃ ရဲ့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ် မှာတော့ အက်စ်တွန် ဗီလာ အသင်း က နယူး ကာဆယ် အသင်း ကို ၂ – ၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ပ ါတယ် ။ ဗီလာရဲ့ သွင်းဂိုး တွေ ဟာ အသင်း ခေါင်းဆောင် ဂရီလစ်ရှ် ကို ပြစ်ဒဏ် ကျုးလွန် ရာကနေ ရရှိ လာတဲ့ ဖရီးကစ် တွေ က နေ ရရှိ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နဲ့ ဆီဗီးလား တို့ ဟာ CSKA Moscow တိုက်စစ်မှုး ဖီဒေါ် ချာလော့ဗ် ကို စောင့်ကြည့် နေကြတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။